Jam. Somaliland Waa Qaran Guulaystay; Qaran Fashilmayna ma Haybsan Karo!(Q.1-aad) | Salaan Media
Jam. Somaliland Waa Qaran Guulaystay;
Qaran Fashilmayna ma Haybsan Karo!(Q.1-aad)
W/Q: Eng. Hussein Adan Igeh (Hussein Deyr)
1. Dareen-Wadareed Waddaninnimo iyo Dal-jacayl Dhab ah:
Dareenka Waddaninimo iyo Dal-jacaylka ummadda JSL maaha mid ku dhisan dhalanteed iyo laxow been ah, balse waa dareen iyo rabitaan qoto dheer oo ku abuuran qofka kasta oo muwaadin Somaliland ah. Dareen-wadareedka Waddaninimo iyo Dal-jacaylku waa ka aasaaska iyo saldhiggaba u ah jiritaanka Qarannimo ee ummadda JSL. Dareenkaa Waddaninimo waa ka muwaadin wal oo reer Somaliland ah (rag iyo haweenba) ku qasba, si joogto ahna ugu baraarujiya in wax walba laga hor mariyo Qarannimada iyo jiritaanka Dalka iyo Dadka. Ummadda JSL waxay dhaqan iyo caado u leeyihiin inay isku bogaadiyaan wixii wanaag iyo horumar ah ee u soo kordha (laga bilaabo Qof illaa Qaran) isla markaana waxay isaga garaabaan wixii gar iyo dawba ah; wixii dhalliil, caddaalad-darro ama hagar ah ee jirtana si wada-jir ah ayay u toosiyaan. Isku-kalsoonida, Wadajirka iyo is-fahanka ummadda JSL waxaa saldhig u ah is-aqoonsi iyo is-qadarin dhexdooda ah. Taasina waa astaamaha ilbaxnimo iyo bisaylka-bulsho ee ummadda JSL lagu tilmaansado.
Sida aynu la wada soconno, Jam. Somaliland waxay muddo 22 sano ku dhaw raadco dheer ugu jirtay sidii ay bulsho weynta caalamka uga mid noqon lahayd ugana heli lahayd ictiraaf iyo aqoonsi buuxa. Dawladnimada iyo madaxbannaanida Jam. Somaliland waxay taam iyo mid dhamaystiranba noqon kartaa oo keliya markay beesha caalamka ka hesho aqoonsi buuxa.
Qaranka Jam. Somaliland wuxuu dhammaanba buuxiyey astaamaha shuruudda u ah dal xaq u leh inuu helo aqoonsi diblomaasiyeed oo buuxa, shuruudahaa oo ah: Dal, Dad, Xuduud, Calan, Dastuur, Lacag, Ciidan, Golayaasha Sharci dejinta iyo Garsoor dhex-dhexaad ah, Madaxweyne doorasho shacab ku yimid, Saxafad Xor ah, Hay’adaha Xuquuqul Insaanka,..
Dhinaca kale, Shacabka Karaamada leh ee JSL iyagoo ku nool gobol ay colaado iyo khataro halis ahi ku gedaamanyihiin, haddana waxay ku guulaysteen inay ka wada shaqeeyaan nabad-gelyada iyo xasiloonida dalkooda. Waxay la dagaallameen arga-gixisada caalamiga ah, xag-jirnimada, budhcad-badeedda, ka hortagga boobka iyo wasakhaynta badahooda, ka hortagga colaadaha, iwm. Shacabka iyo Dawladda JSL waxay hirgeliyeen, u hoggaansameen oo ay ku dhaqmeen nidaamka Dimuqraadiyadda, hannaanka xisbiyada badan iyo kob-cinta nabadda iyo wada-noolaanshaha bulshada. Sidaa darteed, waxaa si kalsooni leh loo odhan karaa in Dawladda iyo Shacabka JSL iyagoon weli aqoonsi ka helin bulshada caalamka, haddana waxay si buuxda uga soo baxeen masuuliyaddii iyo waajibaadkii ka saarnaa dalalka deriska ah iyo guud ahaanba bulshada caalamka. Taasina waa tilmaamaha saldhigga u ah Qaranka Guulaystay.
2. Qaran Guul-darraystay ma Haybsan karo Qaran Guulaystay!
Waxaynu ku jirnaa Xilli ay si cad u muuqato Laba-Wajiilaynta Bulshada Caalamku. Waxaynu ku jirnaa Xilli la abaal-marinayo Qaran Guul-darraystay oo tahli waayey inuu guto xilkii ka saarnaa ummaddiisa. Waxay dunidu kool-koolinaysaa Qaran ku fashilmay inuu ka soo baxo waajibaadkii iyo masuuliyaddii kaga aadanayd bulshada caalamka dhinac kasta oo ay tahayba! Waxa la isku abaal-marinayaa Dawlad Xumada, Xasuuqa iyo Xad-gudubka Bini-aadamnimo, Colaadaha iyo Musu-maasuqa xad-dhaafka ah ee uu Qarankan Guul-darraystay ku sifoobay muddo 22 sano ah!! Waxaynu ku jirnaa Xilli ay Bulshada Caalamku xaq-darro cad iyo gefba ka galayaan Qaran Guulaystay oo ku guulaystay inuu dadkiisa u horseedo Nabad, Degenaansho, Horumar, Dimuqraadiyad iyo Dawlad Wanaag, taasoo ay JSL ku sifowday muddo 22 sano ah!! Waxaynu ku jirnaa Xilli ay Bulshada Caalamku isdiidsiinayaan oo ay indhaha ka lalinayaan rabitaanka ummadda JSL iyo xaqa ay u leeyihiin inay noqdaan qaran madax-bannaan oo ka mid ah bulshada caalamka.
Haddaba, arrinta maanta taagan ee ummadda Jam. Somaliland hortaallaa waxa weeye: Waan Jirayaa, iyo Jiri maysid!!. Waxaynu ka wada dheregsannahay in dalkeenna lagu hayo weerar joogto ah oo af iyo addinba ah. Weerarradaa waxaa horseed ka ah Dawladda itaalka daran leh ee dunidu soo mal-maluuqday balse dadkeeda aan haba yaraatee ka haysanin wax aqoonsi iyo ixtiraam ah. Dadka ku nool dalka Soomaaliya, muddo 22 sano ah ayey waxba ku heshiin waayeen oo ay wax walba isku khilaafsan yihiin. Waxa jirta hal arrin oo dadka ku nool dalka Soomaaliya ay dhammaantoodba ka siman yihiin amaba ay isku raacsan yihiin. Taasoo ah: In aanay Jam. Somaliland ka go’in dalkii ay ka mid ahaan jirtay oo aanay noqonin Qaran Madax-bannaan oo bulshada caalamku aqoonsan tahay! Waxaynu ku jirnaa Xilli ay si aad ah u kordheen hadimooyinka iyo hagar-daamada qorshaysan ee ka dhanka ah Qarannimada iyo Gooni-isutaagga JSL.
INSHA ALLAH; La soco Qaybta 2-aad: Somaliland Waa Qaran Guulaystay; Qaran Fashilmayna ma Haybsan Karo!
W/Q: Architectural-Eng. Hussein Adan Igeh (Hussein Deyr)